wikiHow:Myanmar Language Project - wikiHow
wikiHow:Myanmar Language Project
Wikihow ဆိုတာကျွန်တော်တို့ သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ပြုလုပ်နည်းတွေအားလုံး စုစည်း ပေးတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အခန်းကို တစ်နာရီအတွင်းဘယ်လို ရှင်းရမလဲ၊ ပန်းအိုးဘယ်လိုထိုးရမလဲ၊ Graffiti ဘယ်လိုဆွဲ ရမလဲ ကအစ ရည်းစားစာ ဘယ်လိုရေးရမလဲ အထိ ကို ပုံ၊ ဗီဒီယိုများနဲတကွ တဆင့်စီ ရေးသားနိုင်၊ ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်တဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်။
At least one volunteer who wants to be the dedicated go-between for the English and the မွနျမာ wikiHow communities. This person should be an editor of the English wikiHow who has some familiarity with the way wikiHow works. Beingago-between can involveasignificant time commitment, so only volunteer if you truly want the job.
Several other speakers of the မွနျမာ language that plan to contribute to the new wikiHow.
A few volunteers who will help translate the language file from English to မွနျမာ.
A few volunteers to create some basic documentation pages in the မွနျမာ wikiHow so new editors know how to get started. Important pages like the Writer's Guide and About wikiHow need to be translated.
Loli Mikey Than ~~~~:
EditAfter Signing in
Sign inလုပ်ပြီးလျှင် ဒီLink ကိုနှိပ်ပါ